Wasiiradi maanta la magacaabay imise ayaa xildhibaano ah? – Hornafrik Media Network
Wasiiradi maanta la magacaabay imise ayaa xildhibaano ah?
Hornafrik–Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan cali Kheyre aya maanta waxa auu soo waregto uu ku magacaabay 6-xubin oo kamid noqonaya Golahiisa wasiirada.
6-da wasiir ee maanta uu magacaabay ayaa 5-kamid ah waxaa ay ka tirsanyihiin Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Cabdullahi Goodax Barre oo loo magcabay wasiirka wasaraada waxbarashada ayaa ah xubin sidoo kale kamid ah golaha shacabka Soomaaliya horey ayuu u soo noqday wasiir, xilkaan waxaa kaga horeyay Cabdiraxmaan daahir oo 26-kii bishii hore laga qaday.
Shiikjh Nuur Maxamed Xasan oo lo magacaabay wasirka diinta iyo Owqaatfa Soomalaiaya ayaa sidoo kale kamid ah xildhibanaad Golaha shacabka , waxaa uu ahaa wasirika xanaada xoolaha , xilka maanta lioo magacabayna waxaa uu ku noqonayaa wasiirki sadexaad ee wasaaradan qabta mudada ay jirto xukuumada Kheyre.
Xuseen Shiikh Maxamuud Xuseen badni oo loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha ayaa kamdi ah sido kale xildhibnaad Golaha shacabka horey u soo noqday wasiir , waaxana xilkan baneeyay ninka maanta loo magcabay wasiirka diintab iyo owqaafta.
Cabdullahi Bidhaan warsame oo loo magacaaby wasiirka Kalumeysiga iyo Kheyraadka badda , waa xildhibaan horeyna u soo noqday wasir , waxaana xilkan kaga horeeyay Craxmaan Maxamed cabdi xaashi oo digreetadan looga qaady.
Cabdulqaadir Shiikh Cali Baqdaadi oo noqday wasiiru dowlaha Madaxtooyada ayaa isna kamid ah Golaha shacabka , xilkan waxaa kaga horeeyay Crqaadir Macalin Nuur oo sidaan loga qaady xilka.
Shawaqar Ibraahim Cabdallah oo loo magcaabay wasiirk ku xigeenka Shaqad iyo Shaqaalaha ayaa waxaa xilkan kaga horeay Cabdi Casiis carmaan oo manata digteetada soo baxday looga qaady.
Faah faahin qaraxi Caawa ka dhacay wadada Shaqaalaha ee Muqdisho.
Madaxweeynaha Somaliland oo ka hadlay xaaladda jig-jiga.